Home Wararka Fahad Yasin oo lacag ku bixiyay ka hortaga doorashadii Xisbiga ONLF &...
Fahad Yasin oo lacag ku bixiyay ka hortaga doorashadii Xisbiga ONLF & Fadeexad ka dhalatay
Xisbiga ONLF ayaa markii ugu horeysay intii la aas-aasay waxa ay horaantii bishaan guddoomiye cusub ku doorteen gudaha dalka Itoobiya, kadib doorasho ka dhacday degmada Godey.
Ka dib olole doorasho oo socday mudo bilo ah, ayaa waxaa ugu danbeeyntii Guddooomiye cusub loo doortay Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi (Maadey) oo ahaa xoghayaha Jabhadda, iyada oo jabhadii ONLF ay hadda isu bedeshay Xisbi Siyaasadeed oo ka diiwaan gashan dalka Itoobiya.
Doorashada Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi (Maadey) ayaa shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan guud ahaan dhulka Soomaalida, gaar ahaan dhulka ismaamulka Soomaalida ay si qiiro ku jirto u soo dhaweeyeen. Gudoomiye Cabdiraxmaan ayaa ah shaqsi ay ku dheertahay Soomaalinimada, Soomaalida inteeda badan ay ka rajaynsa Gudoomiyaha cusub in uu isku soo dhaweeyo shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan degaanka Ismaamulka Soomaalida iyo guud ahaan Soomaalida.
Fahad Yasin ayaa isaga oo kaalmo ka dhiganaya Siyaasiga Kenyaanka ah, Farax Macalin laakiin hada isaga iyo gabdha uu dhalay ay ka mid yihiin shaqaalaha ka shaqeeya Xafiiska Madaxweynaha Soomaaliya, ayaa waxa ay isku dayeen in ka horyimadaan doorashada Gudoomiye Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi (Maadey), iyaga oo doonayay in la soo doorto Axmad Yaasin oo ay u arkayeen in uu yahay mid u adeegaya danaha gaarka ah ee ka leeyihiin Degaanka. Waxa ay sidoo kale doonayeen in Axmad Yaasiin ku taageero Madaxweyne Farmaajo dagaalka uu kula jiro Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland.
Sidoo kale taageerida Musharax Axmad Yaasin waxa ay awood dheeraada siin lahayd madaxweynaha ku meel-gaarka ah ee dowlada ismaamulka Soomaalida Mustaf Cagjar.
Fahad ayaa waxa uu halkaas geeyay lacag gaaraysa 60 Milyan oo lacagta Birta ee Itoobiyaanka taas oo u dhiganta labo milyan oo ah lacagta Maraykanka.
Sida ay MOL ku heshay xog rasmi ah lacagtaas ayaa sadax qaybood loo geeyay degeanka Godey, qayb ka mida lacagtaas waxa la soo mariyay Dhowr Xawaaladood ee ku yaale magaalada Wajaale ee ku beegen xaduudda Somaliland iyo Itoobiya, halka qaar kamida lacagtaas gacanta agu geeyay magalaada Addis Ababa, taas oo uu soo qaaday ninka lagu magacaabo Jiis-Mariixaan oo ka tirsan saraakiisha NISA , qaybta u danbeeysana waxaa lagu soo diray xawaalo ka howlgaka gudaha dalka Itoobiya.
Lacagtaas o lagu bixyay si waxa looga badalo natiijada doorashada ayaa hadana waxaa ay xubnihii wakiilada ka ahaa Xisbiga ONLF si buuxda u taageereen Gudoomiye Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi (Maadey).
Xubnaha Golaha Dhexe ee Xisbiga ONLF oo gaaraya 604 qof, ayaa codkooda siiyeen C/raxmaan Sheekh Mahdi Maaday, waxa uuna helay 342 halka musharaxii Fahad Yasin watay oo la tartamayey Cabdiraxaman ee ahaa Axmed Yaasiin uu isna helay 251 cod.
Waxaa nasiib xumo u ah Ummadda Soomaaliyeed in Fahad Yasin uu ka shaqeeynayo in uu dhibaato ka dhexdhaliyo dadka Soomaaliyeed meelkastaa oo ay ku nool yihiin. Dowlada Qatar ayaa waxa ay qayb weyn ka qaadatay in fududeeyso burburinta qoowmiyada dadka Soomaaliyeed meelkastaa oo ay aduunka ka joogaan.
Mid ka mida Xubnaha Golaha Dhexe ee ka qayb galay doorashada ayaa u sheegay MOL in ayan marnaba ka cafin doonin Farmaajo, Kheyre iyo Fahad Yasin dhibaatada au ka maleegeen dhulka ismaamulka Soomaalida iyo kan Soomaaliya dhexdeeda.
Waxa uu yiri “ .. horay waxa u soo masaafuriyeen Qalbid Dhagax, waxa ay lacag ku bixiyeen in ay burburiyaan Jubbaland, walaa’haan ku dhaartay in sadaxdaa nin ay ka shaleeyn doonaan dhibka ay inoo gaysteen, waxa aanu isweydiinaa hada waa waqtiga laakiin, xashaalilah, ooyin baa iyaga u danbeeyn doonta”.